Walaac laga qabo qeybo ka mid ah xarrumaha laanta socdaalka oo la bur burinayo | Somaliska
Qeybo ka mid ah xarrumaha laanta socdaalka ee uu ku leeyahay magaalooyinka Gävle iyo Söderhamn ee dalkaan Iswiidhan ayaa sanadka soo socda, waxaa lugu wadaa in ay noqoto mid joojisa adeegyadii ay qaban jirtay.
Tanina waxaa ay walaac ku abuurtay soo galootiga xarrumahaas ka tirsanaa. Dadkaasi ka wel welsan sida xaalkooda magangalyo doon noqon doono, ayaa waxaa ka mid ah haweeneyda lugu magacaabo Widad oo sheegtay in ay arrintani dareen wel wel leh ku abuurtay soo galootiga xarrumahaasi ka tirsanaa. Mar ay u warameeysay idaacada Iswiidhan ayey sheegtay in eeysan ogeyn goorta ay gacan yaraha ay ku laheyd laanta socdaalka Gävle aysan ogeyn ama ay adkaan doonto.Waxaa ay sidoo kale sheegtay in carruuraheeda ay iskuulka fasax ka qaadan doonaan, walbana ay adkaan doonto.
Maalintii jmcihii ayey soo baxeen warar sheegaya in xarrumaha laanta socdaalka ee qaabilsan is diiwaan gelinta magangalyo doon (is dhiibista) iyo xarrumo kale la joojinayo adeegyadii ay hayeen, saameyna ku yeelan doonto 120 shaqaale oo hey’adaasi ka howl gala. Arrimahan ayaa salka ku haya in adeegyadii soo galootiga la xirriiray ay yaraadeen ama aad hoos u dhacay, ka dib markii la soo rogay sharci cusub oo xadayey magangalyo doonka dalkaan soo galay. Kuwaas oo badankooda dalka ku soo jabay sanadkii 2015-kii.
Racfaanka laga qaato go’aanka laanta socdaalka oo la filayo inuu kor u kaco
Tirada soomaalida magangalyada ka codsata Sweden oo hoos u dhacday.